မြန်မာတွေ အမှတ်သည်းခြေရှိတယ်ဆိုတာ တကယ်ရော ဟုတ်ရဲ့လား – Min Thayt
• မြန်မာပြည်က အာဏာရှင်တွေရဲ့ နိဂုံးကို ပြန်ပြောင်းကြည့်မိပါတယ်။ အထူးသဖြင့်…. ဗိုလ်နေဝင်းနဲ့ ဗိုလ်သန်းရွှေ တို့ အကြောင်း။
•(၁) မြန်မာတွေရဲ့စရိုက်က ခံပြင်းစိတ်၊ အတေးအမှတ်ကြီးတဲ့စရိုက်၊ မခံချင်စိတ်၊ အမှတ်သညာကြီးတဲ့စိတ် အားကြီးတယ်လို့ ထင်ချင်စရာ ရှိပေမယ့်၊ တကယ်တော့ အချိန်ကြာလာရင် အဲသည်လိုမျိုးစိတ်တွေ အားပျော့သွားပြီး ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးတဲ့စိတ်တွေ ရှိတယ်ဆိုတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဗမာ့စရိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျနော် ဆောင်းပါးတွေ ရေးရင်၊ မြန်မာတွေဟာ အမှတ်သညာကြီးပေမယ့် အမှတ်သည်းခြေ မရှိဘူးလို့ ရေးခဲ့တာ ဖတ်ရဖူးမယ် ထင်ပါတယ်။
•(၂) အခုလည်း တို့မြန်မာတွေဟာ မခံချင်စိတ် ပြင်းပြကြပေမယ့်၊ အချိန်တွေ ကြာလာရင် ခံခဲ့ရတာတွေကို မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်နဲ့ အမှတ်သည်းခြေ မရှိတဲ့လူတွေ အဖြစ် မြင်နေရပါတယ်။
•(၃) မြန်မာပြည်မှာ အာဏာရှင်လုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်အာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ တကယ်တော့ လူထုကို မကြောက်ပါဘူး။ သူတို့ကို လက်နက်ကိုင်တိုက်ခဲ့တဲ့ လူတွေကိုလည်း မကြောက်ပါဘူး။ သူတို့ တကယ်ကြောက်တာ၊ စိုးရိမ်တာ၊ လူထုကို မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့တို့နဘေးက၊ သူတို့ အနီးနားက သူတို့အချင်းချင်း ကြောက်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ အချင်းချင်းကြားမှာ၊ ဘယ်သူမှ ဖောက်ထွက်လို့ မရအောင် ဝိုင်းကြီးချုပ်လုပ်ထားကြတယ်။ အချင်းချင်း ပတ်ချည်တုပ်ထားကြတယ်။ အချင်းချင်း ချိတ်ထားကြတယ်။ တနည်းအားဖြင့် အမှုတွဲတူအောင် လုပ်ထားတယ်။ ငါ ကျူးလွန်တာဟာ မင်းကျူးလွန်တာပဲ… ဆိုတာမျိုးတွေ ဖြစ်အောင် လုပ်ထားကြတယ်။ အပြင်ပန်းကနေကြည့်ရင်၊ သူတို့အချင်းချင်း သိပ်အစေးကပ်ကြတာပဲ၊ သိပ်စည်းလုံးကြတာပဲ၊ စစ်ခေါင်းဆောင် ထိပ်ပိုင်းက သိပ်ညီကြတာပဲလို့ ထင်စရာ ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ လက်တွေ့မှာ အဲသည်လို မဟုတ်ပါဘူး။ အဖွဲ့အစည်းရယ်လို့ ဖြစ်လာရင်၊ အစုအဖွဲ့ရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် အက်သံပေါက်တတ်တယ်၊ ဂိုဏ်းဂဏ ကိစ္စ၊ သူ့လူငါ့လူ ကိစ္စ၊ အချင်းချင်း လွန်ဆွဲအားပြိုင်ကြတဲ့ကိစ္စတွေက ရှိစမြဲပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေက ပိုဆိုးပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ သူတို့အားလုံးက ဗျောက်တွေ ကိုင်ထားကြတယ်။ အရပ်ဘက် ပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ၊ အချင်းချင်း သဘောထားကွဲလွဲတာ ရှိပေမယ့် အချင်းချင်း လုပ်ကြံတာ၊ သတ်ဖြတ်တာ၊ ဖျောင်လိုက်တာမျိုးတွေ မရှိတတ်ပါဘူး။ သူတို့မှာတော့ ရှိတယ်။ သူတို့ အချင်းချင်းမှာတော့ ရှိတယ်။ သူတို့က အဲဒါကိုတော့ ကြောက်ပါတယ်။ စိုးရိမ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လက်နက်ကိုင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်နေတာကိုး။ လက်နက်တွေက နဘေးနားမှာ အလွယ်တကူပဲ။
•(၄) နဝတခေတ်မှ တန်ခိုးထွားခဲ့တဲ့ ဦးနေဝင်းရဲ့ ငယ်မွေးခြံပေါက်၊ ဗိုလ်ချုပ်တင့်ဆွေရဲ့ မွေးစားသား၊ (တနည်း) သားတပည့်… ထောက်လှမ်းရေးဗိုလ်ချုပ် ခင်ညွှန့်ကို ဘယ်သူ ဖျောင်လိုက်သလဲ။ ဘာ့ကြောင့် ဗိုလ်ခင်ညွှန့်ကို ထောင်ထဲ ထည့်တာလဲ။ ပြီးတော့ နဝတလို့ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ၁၉၈၈ အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်စောမောင်ကို ဖျောင်လိုက်တာ ဘယ်သူလဲ။ ဗိုလ်ခင်ညွှန့်ကို ရာထူးအာဏာ ချလိုက်ပြီး နေအိမ်အကျယ်ချုပ်အနေနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ချလိုက်တာက၊ သူတို့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ထဲကပဲ မဟုတ်လား။ တိတိကျကျ ပြောရရင်၊ ညွှန်ကြားစေခိုင်းသူ ဗိုလ်သန်းရွှေနဲ့ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်သူ ဗိုလ်ချုပ်မောင်အေးရယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဝင်းရယ်…လို့ ပြောလို့ရနိုင်မယ်။ ဗိုလ်ချုပ်စောမောင်ကိုလည်း စကားပြောမှားလို့ ဆိုပြီး၊ ဆေးထိုးသတ်ပစ်လိုက်တယ်လို့ ပြောတယ်။ အဲဒါ ဘယ်သူ့လက်ချက်လဲ။ ဗိုလ်ချုပ်စောမောင်က ဘာပြောသလဲ၊ ကျနော်တို့က စစ်သားတွေ။ ဒီတော့ အချိန်တန်ရင် စစ်တန်းလျားကို ပြန်မယ်ဆိုလား….။ ဒီလိုနဲ့ မြန်မာပြည်ဟာ စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာ နှစ်ပေါင်း (၂၀) ကျော် ထပ်ပြီး ဖိနှိပ်ခံလိုက်ရတယ်။
•(၅) အခုလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း။ စစ်ကောင်စီရဲ့ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာ အက်သံလိုလို ပေါ်လာပေမယ့်၊ တကယ့်လက်တွေ့မှာ ဖြစ်မလာသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒါဟာ ဘယ်အချိန်မဆို ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း မြန်မာ့စစ်တပ်ရဲ့အတိတ်က ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ဖြစ်ရပ်မျိုးကို သတိရလိုက်တာနဲ့ သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်၊ အာဏာသိမ်း ဗိုလ်ချုပ် မင်းအောင်လှိုင်ဟာ သူနဲ့ အမှုတွဲတူအောင်၊ အချင်းချင်း ချိတ်ထားတာတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါကလည်း အကျိုးစီးပွားအရသော်လည်း ကောင်း ချိတ်ဆက်ထားတယ်၊ လုံခြုံရေးအရသော်လည်းကောင်း ချိတ်ဆက်ထားတယ်၊ သူတို့အချင်းချင်းကြားမှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ အလုံးစုံ ယုံတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ လက်တွေ့မှာ ဗိုလ်သန်းရွှေသာလျှင် ဗိုလ်မောင်အေးလို တစ်သက်လုံး တစ်တွဲတွဲ သစ္စာ မဖောက် မပြန် လက်တွဲဖော်ရတဲ့တွဲဖက် ရှိခဲ့တာ မဟုတ်လား။ ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်မှာ ဗိုလ်သန်းရွှေရဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မောင်အေးလို လူ ရှိပါ့မလား။ ရှိရင်ရော ဘယ်သူ ဖြစ်နိုင်သလဲ၊ မြထွန်းဦးလား၊ သို့တည်းမဟုတ် ဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်းလား။ ကျနော်ကတော့ မထင်ပါဘူး။ စစ်ကောင်စီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဟာ၊ အကျိုးစီးပွားနဲ့ လုံခြုံရေးအရသာ အချင်းချင်း ညီနေကြတယ်လို့ ထင်ရတာပါ။ တကယ်တော့ သူတို့ကြားမှာလည်း အက်သံတွေနဲ့။
•(၆) မြန်မာတွေ အမှတ်သည်းခြေ မရှိဘူး….ဆိုတဲ့ ကိစ္စကို ထပ်ဆက်ချင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ နှစ်ပေါင်း (၂၆) နှစ်ကျော် အာဏာရှင်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်နေဝင်းဟာ ဘယ်လို သေသွားသလဲ။ မြန်မာပြည်မှာ နှစ်ပေါင်း (၂၀) ကျော် စစ်အာဏာရှင်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်သန်းရွှေဟာ အခု ဘယ်လို နေနေသလဲ။ သူတို့ဟာ တိုင်းပြည်နဲ့ လူထုအပေါ်မှာ ရက်စက်မှု အပေါင်း သရဖူဆောင်းခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ သက်ဆိုးရှည်ကြတယ်။ ဗိုလ်နေဝင်းဟာ အသက်ကြီးလို့ လူကြီးရောဂါနဲ့ပဲ သူ့နေအိမ်မှာ အေးအေးဆေးဆေး နေထိုင်ရင်း ကွယ်လွန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူသေသွားတော့၊ ဘယ်လို သဂြိုလ်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကို အသာထား။ ဒါမျိုးက အပဟိက။ အခု ဗိုလ်သန်းရွှေ ဘယ်လို နေထိုင်နေသလဲ။ တကယ်တော့ ၁၉၈၈ လူထုအရေးတော်ပုံမှာ၊ ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ သတ်ဖြတ်ညှင်းဆဲခံရတဲ့ လူအရေအတွက်ဟာ အခု မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ၊ သေကြေခဲ့တဲ့ လူအရေအတွက်ထက် အဆမတန် များပြားတာကို သတိရပါ။
•(၇) တိုင်းပြည်ကတော့ ပြည်ပျက်မလောက်နီးနီးဖြစ်နေပေမယ့်၊ တချိန်က မြန်မာပြည်ကို သေနတ်မိုး အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကတော့ အေးအေးလူလူပဲ နေထိုင်နေပါတယ်၊ အေးအေးချမ်းချမ်းပဲ နေထိုင်နေပါတယ်၊ သူတို့ဟာ စုဆောင်းထားတဲ့ စည်းစိမ်နဲ့ နေသာရာမှာ နေသာနေပါတယ်။ ဒါဟာ အစဉ်အလာဖြစ်နေပါသလား။ အာဏာသိမ်းဖြစ်ရပ်ကို ဟိုးယခင်က အတိတ်သမိုင်းမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ၅၈ အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ အမြဲတမ်းလိုလို ဥပမာပေး ဆင်ခြေပေးတတ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ဟာ အဆိုးဆုံးကို မတွက်ထားဘူးလို့ ထင်နေသလား။ သူအဆိုးဆုံးလို့ တွက်ထားခဲ့တဲ့ အခြေအနေဟာ ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးဖြစ်မလဲ။
• စောမောင်လိုလား၊ ခင်ညွှန့်လိုလား။ သို့တည်းမဟုတ် ဗိုလ်နေဝင်းနဲ့ ဗိုလ်သန်းရွှေတို့လိုလား။
•(၇) နောက်ဆုံး သူ မဖြစ်ချင်ဘဲ ဖြစ်ဖို့ ရွေးချယ်ရင်တောင် ၊ ဗိုလ်နေဝင်းလို့ အာဏာလက်လွှတ်လိုက်ရပြီး သူ့နေအိမ်မှာပဲ အသက်ကြီးထိ နေထိုင်ချင်ပါလိမ့်မယ်၊ တနည်း….. မီးစာကုန် ဆီခမ်းမှ သူ သေဆုံးလိုပါလိမ့်မယ်။ ဗိုလ်ခင်ညွှန့်လို၊ ဗိုလ်စောမောင်တို့လို အဖြစ်မျိုး သူဘယ်တော့မှ ကြုံချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တပ်တွင်းက လူတွေရဲ့ အကျင့်စရိုက်ဟာ ဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာ သူ မသိရိုး ရှိမှာလား။ သိပါတယ်။ သိနေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း သူ့ရဲ့ စစ်ကောင်စီ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာ၊ သူဟာ သူ့ကို မဖျောင်နိုင်အောင် ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ပတ်ချည်တုပ်ထားတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။ စဉ်းစားကြည့်ပါ။
• နောက်တစ်ခုက မြန်မာလူထုရဲ့ကိစ္စ။
•(၈) စစ်အာဏာရှင်ကို ဘယ်လောက်ပဲ အသက်နဲ့ ဘဝတွေ ပေးပြီး လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေ ၊ လူထုတိုက်ပွဲတွေ ဝင်လာခဲ့သည်ဖြစ်ပါစေ၊ မြန်မာတွေဟာ အချိန်ကြာလာရင် မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်နဲ့ ခွင့်လွှတ်နားလည်တတ်တယ်လို့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေက သိနေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ထပ်ခါ ထပ်ခါ မြန်မာလူထုကို စော်ကား၊ သတ်ဖြတ်၊ ညှင်းဆဲတာတွေ ဆက်လုပ်နေပါတယ်။ ဒီအဆိုးကျော့သံသရာကို ဘယ်နေရာကနေ ဖောက်မလဲ။
•(၉) မြန်မာတွေဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ဒေါသတွေ ဖြစ်ဖြစ်၊ နာကျည်းမှုတွေ၊ နာကျင်မှုတွေ၊ အတေးအမှတ်တွေ ကြီးတာပဲလို့ ဆိုဆို လက်တွေ့မှာတော့ ယဉ်ကျေးတဲ့ အမျိုးဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
•(၁၀) အာဏာရှင် ဦးနေဝင်း ရာဇပုလ္လင်ပေါ်က ဆင်းပြီးတော့၊ ဘယ်သူက အာဏာလက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ ဦးနေဝင်းကို ယခင်က အငြိုးအတေးတွေနဲ့ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားတယ်ဆိုတာမျိုး ရှိခဲ့သလဲ။ ဗိုလ်နေဝင်းနဲ့ ဗိုလ်ခင်ညွှန့်တို့ကို သူတို့ တပ်တွင်းအာဏာစက် ပြင်းထန်နေစဉ်တုန်းက၊ လုပ်ကြံဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ စစ်သား၊ အရပ်သားတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့်၊ သူတို့ အာဏာလက်လွှတ်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကာလတွေမှာ၊ သူတို့ကို လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ဖို့၊ ယခင်က သွေးကြွေးကို ပြန်ဆပ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ မြန်မာတွေ ဘယ်လောက်ရှိခဲ့သလဲ။
•(၁၁) ကျနော့် လေ့လာမှု အားနည်းတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော် ဖတ်မှတ်လေ့လာရသလောက်ကတော့၊ ဗိုလ်နေဝင်းနဲ့ ဗိုလ်ခင်ညွှန့်တို့၊ အခု ဗိုလ်သန်းရွှေတို့ကို သူတို့အာဏာလက်လွှတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာ သူတို့ကို ယခင်က သွေးကြွေး ပြန်ဆပ်ဖို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်မျိုး တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးသေးပါ။
ဒါဟာ အဓိက အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၂) ဒါ့ကြောင့် စစ်အာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်းဆောင်အဆက်ဆက်ရဲ့ အစဉ်အလာအရ၊ ဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင်ကလည်း သူ့အတွက် ဒီအခြေအနေ ရှိနေမယ်လို့ စွဲစွဲမြဲမြဲ ယုံကြည်ထားပုံရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း အကန့်အသတ် မရှိ ဆက်မိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစဉ်အလာကို ဒီအချိန်ကျမှ မချိုးဖျက်ရင် ဘယ်တော့ ချိုးဖျက်မလဲ။
မြန်မာတွေ အမှတ်သည်းခြေမရှိဘူးလို့ ကျနော် ဆက်ပြီး ရေးမနေချင်ပါဘူး။
လူထုဒေါ်အမာပြောဖူးတဲ့…. အာဏာရှင်ဟာ ဘယ်တော့မှ အရှင်မထွက်ဘူးဆိုတဲ့ စကားကိုတော့ အားနာပါတယ်။
မြန်မာပြည်က အာဏာရှင်တွေက အရှင်ထွက်တယ်…. အမေ။
ဗိုလ်နေဝင်း၊ ဗိုလ်ခင်ညွှန့်၊ ဗိုလ်သန်းရွှေ….။
အခု မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ၊ မြန်မာတွေဟာ အာဏာရှင်ကို အမြစ်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ စကားတွေ ကြားရတိုင်း၊ တွေ့ရတိုင်း ကျနော် သိပ်မယုံချင်သေးဘူး။
မြန်မာတွေသာ တကယ် အမှတ်သည်းခြေ မရှိဘူးဆိုတာ သေချာရင်…. MAH ဟာ စောမောင်လို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်၊ မဖြစ်ရင်တော့ ဗိုလ်သန်းရွှေနဲ့ ဗိုလ်နေဝင်းတို့လို သက်ဆိုးရှည်နိုင်အုံးမယ့် အစဉ်အလာ ရှိနေပါကြောင်း….
Tagged Myanmar, Myanmar Society, Political culture, Social Culture, Social Relation, Society
Previous post တော်လှန်ရေးအရွေ့
Next post ▄ တိုင်းပြည်သည် တပ်မတော်အတွက်လား